Asteroid belt: njirimara, nhazi na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Asteroids abughi ihe ozo di iche iche di na mbara igwe nke di na Sun. N’agbanyeghi na ha adighi ka mbara ala, ha nwere okike di otu a. Achọpụtala ọtụtụ asteroroid na mbara igwe nke usoro mbara igwe anyị. Ọtụtụ n'ime ha na-etolite eriri asteroid dị ka anyị si mara. Mpaghara a dị n’etiti ngagharị nke Mars na Jupiter. Dị ka ọ dị na mbara ala, ụzọ ha na-aga okirikiri.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara eriri asteroid, njirimara ya na mkpa ya.
2 Ọnụnọ nke eriri asteroid
3 Mmalite nke eriri asteroid
4 Esemokwu dị n'etiti asteroids na meteorites
A na-akpọ ya eriri belt ma ọ bụ eriri ukwu ma ọ dị na mpaghara anyị anwụ n’agbata mbara igwe nke Jupita na Mars, nke kewara mbara ala dị n’ime ya na mbara ala ndị ọzọ. Ejiri otutu onu ogugu mara ya okwute nke igwe nke nwere udi di iche na nha di iche iche, nke anakpo asteroids, ma soro Cwars dwarf.
Aha eriri ukwu bụ ịmata ọdịiche dị na ya na ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe, dịka Kuiper Belt n'azụ orbit nke Neptune ma ọ bụ dị ka Oort Cloud, nke dị na nsọtụ oke nke usoro mbara igwe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ìhè site na anyanwụ.
Ihe mejupụtara eriri asteroid bụ ọtụtụ nde ihe ndị dị na mbara igwe, enwere ike kee ya ụzọ atọ: carbonaceous (type C), silicate (type S) na metallic (type M). Ugbu a enwere igwe ise kachasị ukwuu: Pallas, Vesta, Cigia, Juno na mbara igwe kachasị ukwuu: Ceres, nke a na-ahazi dị ka mbara ala nke nwere dayameta nke 950 kilomita. Ihe ndị a na - anọchite anya ọkara ọkara nke eriri eriri, O ruru naanị 4% nke mkpokọta ọnwa (0,06% nke oke ala).
Agbanyeghi na egosiputara ha nke oma na onyonyo nke sistemu nke igwe, n’enwe igwe ojii, nke bu eziokwu bu na asteroid ndia di n ’ebe di anya na o siri ike ighari n’ime oghere ahu wee soro otu n’ime ha kutuo. Kama nke ahụ, n'ihi oscillation ha na-emebu, ha na-agaru nso nke Jupita. Ọ bụ mbara ala a nke ya na ike ndọda ya na-ebute enweghi nsogbu na asteroids.
Ọnụnọ nke eriri asteroid
Asteroid abughi nani na eriri a, kamakwa na trajectories nke mbara ala ndị ọzọ. Nke a pụtara na ihe okwute a nwere otu ụzọ gburugburu anyanwụ, mana onweghi ihe obula iche. I nwere ike iche na ọ bụrụ na eriri kpakpando dị n’otu ebe a na-agba ụwa anyị a gburugburu, o nwere ike gbakọta ma kpata ọdachi. Nke a abụghị ikpe. Enweghị mkpa ichegbu onwe gị ma ha ga-akụ ma ọ bụ na ha agaghị ada.
Asteroids na otu orbit dị ka ụwa na-ejikarị otu ọsọ ọsọ. Ya mere, ha agaghị ezute. Iji mee nke a, ụwa ga-eji nwayọ nwayọ ma ọ bụ asteroid ga-eme ka ọsọ ya dịkwuo elu. Nke a agaghị eme na mbara igwe belụsọ na enwere ike ndị ọzọ iji mee ya. N'otu oge ahụ, iwu mmegharị na-achịkwa inertia.
Mmalite nke eriri asteroid
Echiche a nabatara ebe niile gbasara mbido eriri asteroid bụ na sistemu nke igwe niile sitere na akụkụ nke protosolar nebula. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nke a nwere ike ịbụ nsonazụ nke ihe a na-achụsasị esiteghị na mbara igwe buru ibu karịa, akụkụ ụfọdụ n'ihi nnyonye anya sitere na ebili mmiri ndọda sitere na Jupiter, mbara ụwa kachasị ukwuu na mbara igwe. Nke a na-eme iberibe okwute ahụ na-agbakọ ibe ha ma ọ bụ chụpụ ha na mbara igwe, na-ahapụ naanị 1% nke mbido mbụ.
Nkwupụta okwu kachasị ochie na-egosi na eriri asteroid nwere ike ịbụ mbara ala nke mebere nebula mebere, mana ụfọdụ mbibi ma ọ bụ mbibi n'ime ya emebiwo ya. Agbanyeghị, n'enye eriri dị ala na ike dị oke mkpa achọrọ iji kpoo mbara ala n'ụzọ dị otu a, echiche a yiri ka ọ gaghị adị.
Asteroid a sitere na nhazi nke sistemu. Usoro mbara igwe malitere ihe dịka ijeri afọ 4.600 gara aga. Nke a na - eme mgbe igwe ojii na ikuku na - ada. Mgbe nke a mere, imirikiti ihe na-adaba na etiti igwe ojii ahụ, na-akpụ anyanwụ.
Ihe fọdụrụnụ ghọrọ mbara ala. Agbanyeghị, ihe dị na eriri asteroid enweghị ohere ịghọ mbara ala. N'ihi na asteroids na-etolite n'ọtụtụ ebe na ọnọdụ, ha abụghị otu. Nke ọ bụla n’ime ha dị iche n’ebe anyanwụ dị anya. Nke a na-eme ka ọnọdụ na ihe mejupụtara dị iche. Ihe ndị anyị hụrụ abụghị nke okirikiri, kama ọ bụ ezighi ezi ma jupụta. A na-etolite ha site na ijigide na-aga n'ihu na ihe ndị ọzọ ruo mgbe ha dị ka nke a.
Esemokwu dị n'etiti asteroids na meteorites
Nkewa nke Asteroid dị ka ọnọdụ ha n’usoro mbara igwe; a na-akpọ ndị ọzọ NEA n'ihi na ha dị ala nso. Anyị na-achọtakwa Trojans, nke bụ ndị na-agba Jupita gburugburu. N'aka nke ọzọ, anyị nwere Centaurs. Ha dị na mbara igwe dị na mpụta, na nso Oort Cloud. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ike ndọda na oke ụwa ‘ejidela’ ha ogologo oge. Ha nwekwara ike pụọ ọzọ.
Meteorite bụ ihe ọ bụla karịa kpakpando nke na-akụ ụwa. O nwetara aha a n'ihi na mgbe ọ banyere na mbara igwe, ọ na-ahapụ ụzọ nke ìhè, nke a na-akpọ meteor. Ha dị ize ndụ nye ụmụ mmadụ. Agbanyeghị, ikuku anyị na-echedo anyị pụọ na ha n'ihi na ha na-emecha gbazee mgbe o ruru ya.
Dabere na ihe mejupụtara ha, ha nwere ike ịbụ okwute, ọla, ma ọ bụ abụọ. Mmetụta nke meteorites nwekwara ike ịdị mma, n'ihi na ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ozi gbasara ya. Ọ bụrụ na o buru ibu nke na ikuku agaghị ebibi ya kpamkpam mgbe ha batara, ọ nwere ike imebi ihe. Enwere ike ibu amụma ya taa site na teknụzụ nyocha nke ụmụ mmadụ nwere banyere sistemu na mbara igwe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere eriri asteroid na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Belt Asteroid
Gịnị bụ ala ọma jijiji